Rag ku Eedeesan dilka Hindiya Xaaji Maxamed oo maanta Cadaalada hortagaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rag ku Eedeesan dilka Hindiya Xaaji Maxamed oo maanta Cadaalada hortagaya
25th February 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee dalka, ayaa maanta lagu wadaa in la horgeeyo dhoor qof oo loo heesto in ay ku lug lahaayeen qaraxii lagu dilay Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo katirsaneed Warbaahinta Dowlada.
Ciidamada Nabad Sugida ayaa howlgalo ay sameeyeen waxa ay kusoo qabteen shan qof oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo 3-dii december sanadkii hore lagu dilay qarax gaarigeeda loogu soo xiray.
Xarunta Maxkamada maanta la horgeenayo ragan ku eedeesan Dilka Hindiya ayaa waxaa ku sugan qareeno difaacaya ragan loo heeso kiiska dilkaasi iyo ehelada eedeesanayaasha iyo waliba ehelada Wariye Hindiya.
Warbaahinta Dowlada ayaa horey looga baahiyay Muuqaalka labo nin oo qiranaya in ay ku lug lahaayeen waxna ka maleegeen qorshihii lagu dilay Allaha u naariistee Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo katirsaneed Shaqaalaha Idaacada iyo Tv-ga Dowlada.
Somalia come of age, as Somali instructors conduct CAF “C” license course
Wasaaradda Shaqada oo u digtay shirkado dadka lacago uga qaadaya inay Sacuudiga shaqo u geynayaan